Taom-pifidianana ihany koa ity taona ity, ho an'ireo oniversite manerana ny nosy, hifidianana ireo izay hitantana indray mandritra ny efatra taona manaraka. Anisan'izany ny filohan'ny oniversite, sojabe, lehiben'ny sampam-pampianarana sy lalam-piofanana ary ny filankevi-pitantanana. Efa voafaritra avokoa araka izany ireo daty hanatanterahana izany fifidianana izany.
Any Antsiranana no hanatanterahana ny Universiades amin'ity taom-pianarana ity, fihaonana aram-panatanjahantena ihaonan'ireo mpianatra sy mpanabe rehetra eny amin'ny oniversitem-panjakana.
Mbola any ihany koa no hanatanterahana ny « Forum » mahakasika ny fikarohana ny angovo azo havaozina ny volana jolay izao.
Hohatsaraina ny rijan-teny momba ny rafi-pampianarana LMD izay efa nanomboka nampiharina teo amin'ireo oniversite sy IST manerana an'i Madagasikara nandritra ny efa-taona izay.
Hisy ny fanambarana lehibe hohataon'ireo mpitantana ny oniversite sy IST avy amin'ny lafy valon'ny nosy mahakasika ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eny anivon'ireo Anjerimanontolo na ny « paix sociale » mba ahafahana mampiodina araka ny tokony ho izy ny fampianarana sy tsy hampitarazoka ny fampianarana.